At 4/27/2014 10:14:00 PM No comments:
မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဒုက္ခသည် ပြည်သူကို လှည့်စားနေသော KIA / KIO
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIA/KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့၊ ဂျေယန်းစခန်းနှင့် ဖုန်လွမ်ယန် ဒုက္ခသည် စခန်းများ မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ဟောပြောပွဲများကို ဧပြီလ ၂၅ရက်က ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ဒုက္ခသည် ပြည်သူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “တိုက်ပွဲ မဖြစ်ခင် ၂၀၁၀ မှာ KIA/KIO ဗဟိုကနေ ကော်မတီဖွဲ့စည်ခဲ့ပြီး တာဝန်ခံ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင် ဦးဆောင်ခဲ့ ပါတယ်၊ KIA အဖွဲ့ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူတွေကို ဘိန်းပြတ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ မူးယစ်ဆေး ဝါးကို KIA အဖွဲ့ဝင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြီးတော့ စိုက်ပျိုးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။
At 4/27/2014 02:15:00 PM No comments:
ရန်ကုန်မှာ ဟိုင်းလတ်ပြေးဆွဲခွင့် သတ်မှတ်ရက် ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်အထိ တိုးမြှင့်ပေးရန် တောင်းဆို
ဟိုင်းလတ်ယာဉ်လိုင်းများအား ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပြေးဆွဲခွင့် ရပ်ဆိုင်းဖို့ သက်ဆိုင်ရာက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်က သတ်မှတ်ရက်ကို ဒီနှစ်အကုန် အထိ ရွေ့ဆိုင်းပေးဖို့ ဟိုင်းလတ်ယာဉ်လိုင်း သမားတွေက တောင်းဆိုလိုက်
At 4/27/2014 02:12:00 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီအစိုးရသက်တမ်း ၃ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်း စရာကောင်းသည်မှာ မီဒီယာအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နေသူများသည် ကိုယ်ကျိုးသာ ကြည့်တတ်ပြီး အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း မတင်ပြရဲခြင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုထင်ယောင်
ထင်မှား ဖြစ်နေ ရပေသည်။ မီဒီယာတွင် ဖော်ပြတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းကအစ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီဖို့လိုပါသည်။ ဘာပဲပြောပြော မိမိ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ မီဒီယာဖြစ်တာမို့ အဆင့်အတန်းရှိဖို့လိုပါသည်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ဖော်ပြတဲ့သတင်းက ပထမအဆင့်မှန်ကန်မှုရှိလား၊ မရှိဘူးလား. ဒုတိယအဆင့် အမှန်တရားဘက်က
ရပ်တည်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်လိုတင်ပြမှာလဲ. တတိယအဆင့်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို အကျိုးပြုရဲလား. တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လား.
ဒီလိုတွေကြည့်ရပါမယ်. ဆိုလိုတာကတော့ အစိုးရလုပ်ရပ်တွေကမှားတယ်ဆိုရင် မှားတယ်ဆို တာ ထောက်ပြနိုင်တာမျိုးပေါ့. အဟောင်းတွေ၊ သိပြီးသားတွေ ပုတ်ခတ်ရေးသား တာဟာ မြန်မာရဲ့အကျင့်လို ဖြစ်နေပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ မီဒီယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကို လေ့လာကြည့်တော့ ခေတ် အဆက်ဆက်က အစိုးရကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်
ထောင်ထဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးပါရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခေတ်စနစ်ကပြောင်းသွားပါပြီ။ သိက္ခာရှိရှိရပ်တည်ဖို့ မီဒီယာလောကကို သတိပေးချင်တယ်. ဒီနိုင်ငံကို ဘယ်လိုအခတ်အခဲတွေကြားထဲက အခုလိုရပ်တည်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်. မီဒီယာသည် ပါတီရဲ့လက်ပါးစေဖြစ်နေသည်။
ယခုတွေ့နေရတာတွေကတော့ မီဒီယာသမားတွေဟာ ပါတီရဲ့ လက်ပါးစေဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကပါတီတွေဟာ ပါတီသတင်းစာထုတ်စရာမလိုဘဲ ပါတီနှင့် ပတ်သက်တာကို မီဒီယာမှဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ့ရသည်။
အသုံးအနှုန်းမှားတာတွေလဲတွေ့ရသည်။ ဥပမာ- ပြည်သူ့တပ်မတော်ကို စစ်တပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုပြီး အပုတ်ချသည်. တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ကို ကယ်တင်ထားတယ်ဆိုတာမေ့နေသည်. သမိုင်းက သက်သေရှိသည်. တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်ကို မကယ်တင်ရင် တိုင်းပြည်မီးဟုန်းဟုန်း
တောက်ပြီး အေးချမ်းမှုမရှိဘဲ တိုင်းပြည်ပြိုကွဲသွားနိုင်သည်ကို မေ့နေသည်။ သူပုန်ကို အကောင်းထင်နေသည်။
နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် မီဒီယာလုပ်ကိုင်သူတို့ကို သတိပေးချင်ပါသည်. သိက္ခာရှိတဲ့ မီဒီယာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြစမ်းပါ. ကျွန်ဖြစ်မဲ့ မီဒီယာမလုပ်ဆောင်ပါနဲ့. အမှန်ကိုဖော်ပြရန် မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် မြန်မာ့
ပြည်သူ့အကျိုး၊ နိုင်ငံအကျိုး.သယ်ပိုးနိုင်အောင်လုပ်ပါ. ပြည်သူပြည်သားတစ်ယောက်သည် တိုင်းပြည် ကို ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်. မီဒီယာသမားများ မီဒီယာဖြင့် မိမိနိုင်ငံကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါ. အမှားကို အမှားအတိုင်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖြစ်စေရန်မီဒီယာကျင့်ဝတ်
မြန်မာမီဒီယာလောကကို အထင်အမြင်သေးနေသည့် ကမ္ဘာ့မီဒီယာကို မီဒီယာဖြင့် ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကို မီဒီယာလောကဖြင့်မြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေ…..
မြန်မာ့မီဒီယာသမားများ သိတိထားရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုသည်…..
At 4/27/2014 01:31:00 PM No comments:
သီလဝါ အထူး စီးပွားရေး ဇုန် မြေကွက် များ မေလ အတွင်း ဈေးနှုန်း ထုတ်ပြန် ကာ ရောင်းချ မည်
သီလဝါ အထူး စီးပွားရေး ဇုန်ရှိ စက်မှုဇုန် မြေကွက် ဈေးနှုန်း များကို လာမည့် မေလ အတွင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန် ရောင်းချ ပေးသွား နိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း သီလဝါ သာယာရေး အဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦး က ပြောကြား ခဲ့သည်။ သီလဝါ အထူး စီးပွားရေး ဇုန် ၏ မြေပြုပြင် မှုနှင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်း များကို လုပ်ဆောင် နေရာ ယခုအခါ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့် နီးပါး ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စက်မှု ဇုန်မြေ ကွက်ဈေး များကို တရားဝင် မသတ်မှတ် ရ သေးသော်လည်း မေလ အတွင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကာ မြေကွက် များ စတင် ရောင်းချ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 4/27/2014 01:01:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်က န၀ဒေးဥယျာဉ် အိမ်ယာမြေနေရာဟာ အရင်က လယ်သမားတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့တဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို သိမ်းခဲ့ပြီး ဆောက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် လျော်ကြေးပေး ဖို့ ဒီနေ့ လယ်သမား ၆၀ လောက်က န၀ဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲ နိုင်ငံပိုင်သတင်း စာတွေထဲမှာ အသိမ်းခံထားရဲ့လယ်သမားတွေရဲ့လယ်တွေကို စိစစ်ပြီး ပြန်လည်ပေးမယ်လို့ ပါရှိလာတာကြောင့် အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ လယ် ၁၄
At 4/27/2014 08:23:00 AM No comments:
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့၌ ခွေးရူးကိုက်ခံရ၍ သေဆုံးသူ များပြားနေ
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အချို့၌ ခွေးရူးအကိုက်ခံရ၍ သေဆုံးရသည့်ဖြစ်စဉ်များ များပြားလာကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး ကြိုတင်ထိုးနှံရန် အခက်အခဲ များရှိနေကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် ခွေးရူးကိုက်ခံရ၍ သေဆုံးသူများရှိနေပြီး ပြည်နယ်အချို့တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများကြောင့် ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့် မရရှိကြကြောင်း သိရသည်။
At 4/27/2014 07:48:00 AM No comments:
At 4/27/2014 07:41:00 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဦးတင်နိုင်သိန်းနဲ့ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်းတို့ တက်ရောက်ကြသလို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေလည်း ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။
At 4/27/2014 07:38:00 AM No comments:
At 4/27/2014 07:18:00 AM No comments:
At 4/27/2014 07:16:00 AM No comments: